ज्ञानेन्द्र शाहीलाई सर्बोच्चमा मुद्धा हाल्दै पुण्य गौतम-हेर्नुहोस भिडियो - सुदूर नेपाल
ज्ञानेन्द्र शाहीलाई सर्बोच्चमा मुद्धा हाल्दै पुण्य गौतम-हेर्नुहोस भिडियो
केहि दिन अगाडी पुण्य गौतम र ज्ञानेन्द्र साही बीचको बिबादले अर्को रुप लिएको छ।ज्ञानेन्द्र शाहीले मानहानी गरेको भन्दै पुण्य गौतम मिडियामा आएका छन।ज्ञानेन्द्रले माफी नमागे सर्बोच्च सम्म यो मुद्धा पुग्ने उनको दाबि छ।उनले केहि दिन अगाडी मिडियामा दिएको अन्तरबार्ता र संगै पत्रकारलाइ लेखेको म्यासेज भाइरल भएको छ।ज्ञानेन्द शाही पछिल्लो समय भष्ट्राचार बिरुद्धको ससक्त अभियानमा छन भने एता पुण्य गौतम पनि बिभिन्न विश्लेषण गर्दै आउनु भएको छ।गौतमले पत्रकरलाइ तत्काल भिडियो दिलेट गर्न आग्रह गरेका थिए नगरे १ करोड क्षेतिपूर्ति सहित अपराध महासखामा जाने उनले बताएका थिए।हेरौ भिडियो कुराकानी
काठमाडौं । अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलसंग चौथो विवाह गरेका फिल्म निर्माता छविराज ओझाको यो विवाह पनि धरापमा पर्न थालेको छ । घरेलु हिंसाको शिकार भएको भन्दै चौथो श्रीमती शिल्पा पोखरेलले प्रहरीमा उजुरी दिएकी छन् । केही समय अघि मात्र औपचारीक विवाह गरेका शिल्पाले आखिर किन प्रहरीमा उजुरी दिइन् ? शिल्पाका आफन्तका अनसार छवीले शिल्पालाई कानमा भित्रि चोट पुग्नेगरी हातपात गरेका थिए । उनको कानको जालीमा समस्या भएको छ ।त्यसपछि उनले श्रीमानवाटै असुरक्षा भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिइन् । विहिवार महानगरीय प्रहरी महाशाखाले उनीहरुलाई बोलाएर छलफल गरायो । शिल्पाले धेरै कुरा पत्रकार सामु बोलिनन् तर छवीले घरभित्रको कुरा बाहिर ल्याउन नपर्ने भन्दै प्रतिकृया दिए । शिल्पासंग छवीको चौथो विवाह हो । शिल्पासंग विवाह गर्नु अघि छवीले रेखा थापासँग विवाह गरेका थिए । रेखासँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि उनले शिल्पासंग विवाह गरेका हुन् । उनीहरु केही वर्ष विवाह नगरी संगै बस्दै आएका थिए । ६ महिना अघि मात्र उनीहरुले विवाह दर्ता गराएका छन् ।
Previous Post: छोरीले स्तन टोकी दिंदा आमालाई क्यान्सर! पैसा नहुँदा हस्पिटलको बेडमा छट्पटाउँदै (भिडियोसहित)
Next Post: लगातार वर्षाले राजधानीमा जनजीवन प्रभावित-फोटो फिचर